သေသို့2| WikiWon
mujeer ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2018
On this page, you will be able to find Into the Dead2Android app in APK format which you can install on your Andriod device offline. သေသို့21.3.1 APK download. သေသို့2Android application is developed by PIKPOK.
App ကိုဒေါင်းလုပ်ဗားရှင်း 1.3.1
Last Updated ဇန်နဝါရီ. 31, 2018
App က PIKPOK
အမျိုးအစား Free Action App
အကြောင်းအရာခဲ့သည် Rating Mature 17+
ဖြစ်ပေါ်နေသောပုံပြင်နှင့်မျိုးစုံနောက်ဆုံးတွင် – ပြည့်စုံသော7အရေးယူ-ထုပ်ပိုးအခန်းကြီး, 60 အဆင့်ဆင့်, နှင့်စိန်ခေါ်မှုများရာပေါင်းများစွာ
အစွမ်းထက်လက်နက်နှင့် ammo အခွင့်အရေး – Mele လက်နက်များသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်, သေနတ်, ပေါက်ကွဲ, and more!
မတူညီဂိမ်း – စစ်တပ်သေနတ် emplacements ထံမှမီး, မော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကနေအနေဖြင့်အလုံးအရင်းကိုကွပ်မျက်, အသကျရှငျနေထိုသူတို့ထိုး, သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ခြေလျင်သူတို့နောက်ကိုသွား
အကွိမျမြားစှာ, စွဲငြိဖွယ်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ – ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများရှာဖွေတွေ့ရှိ, ရေနံလယ်ကွင်းနှင့်စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများထံမှစခန်းချနှင့်ကျေးလက်လယ်ယာအသိုင်းအဝိုင်း
Daily သတင်းစာနှင့်အထူးအဖြစ်အပျက်သည် Modes
Download Into the Dead21.3.1 APK ကို (Download Links)